Hordhac: Sunderland v Liverpool – Rodgers Oo Haminaya In Kooxdiisa Ay Casharo Ka Barato Qaladaadkoodii Hore. - Wargane News
Home Sports Hordhac: Sunderland v Liverpool – Rodgers Oo Haminaya In Kooxdiisa Ay Casharo...
Kulanka: Sunderland v Liverpool
Garoonka: Stadium of Light
Waqtiga: 3:45pm Saacada Geeska Afrika
Kooxda Sunderland ayaa ah kooxda barbaraha ugu badan garoonkeeda ku gashay xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League, waxaana ay durbaba garoonka Stadium of Light ku galeen lix barbaro ah.
Bil ka hor labadaan kooxood ee Sunderland iyo Liverpool waxa ay barbaro goolal la’aan ah ku galeen garoonka Anfield ee kooxda Merseyside, sidaasi darteed macquul ma tahay inay mar kale dhibcaha kala qeybsadaan.
Laakiin waxaa laga yabaa inay taasi isbedesho maanta madaama Liverpool aysan wax barbaro ah ku gelin garoon ay marti ku aheyd xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League, Liverpool ayaana ka mid ah labo kooxood ee 92da kooxood ee heerarka kala duwan ee kubada cagta Ingariiska ee sidaasi dhihi kara.
Simon Mignolet iyo Jordan Henderson ayaa ku laabanaya kooxdoodii hore iyadoo labada nin ay labo jiho kala aadeen tan iyo markii ay u soo dhaqaaqeen Anfield. Henderson waxaa loo saadaalinayaa inuu kabtanimada kooxda ka bedelo Steven Gerrard halka Mignolet bedelkiisa suuqa kala iibsiga laga baadigoobayo.
Barbaro kale oo ay galaan waxa ay jahwareeri doontaa labada kooxood ee Sunderland iyo Liverpool, laakiin goolhayayaasha waa ay ku farxi doonaan inay qaataan 0-0.
Kabtanka Sunderland Lee Cattermole ayaa weli la dhibtoonaya dhaawac gumaarka ah, halka Jack Rodwell uu mari doono baaritaan xilli danbe maanta.
Ricky Alvarez iyo Emanuele Giaccherini ayaa taam ah mar kale laakiin Sebastian Coates ayaan ka horimaan karin kooxda uu amaahda uga maqan yahay.
Adam Lallana ayaa dhaawac kaga maqan Liverpool halka Kolo Toure uu la maqan yahay xulkiisa Ivory Coast ee ka qeybgalaya koobka Qaramada Afrika.
Joe Allen, Glen Johnson, Jon Flanagan iyo Brad Jones ayaa dhamaantood dhaawacyo ku maqan.
Sunderland ayaa badisay mid ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeysay ee ay martigeliyeen kooxda Liverpool.
Liverpool ayaan laga badinin shantii kulan ee ugu danbeysay ee ay ka horyimaadeen Sunderland, waxa ay badiyeen seddex ka mid ah halka labada kulan kale ay barbaro galeen.